mairie-antananarivo – Kaominina Antananarivo Renivohitra: Fandaminana ny tsena
Kaominina Antananarivo Renivohitra: Fandaminana ny tsena
auteur 31 may 2017 Commentaires fermés
Nanatanteraka fandaminana ireo mpivarotra amoron-dalana teny anoloanan’ny Esplanade Analakely ny Kaominina Antananarivo Renivohitra ny Talata faha 30 May 2017. Nambaran’Andriamatoa Lehiben’ny Tsena Analakely fa nafindra teo alohan’ny esplanade Analakely ireo mpivarotra 320 teo amin’ny lalana anelanelan’ny Pavillon Analakely, ny antony dia ny hamelomana indray ny lalana ho an’ny fiarakodia.
Efa hatramin’ny alina no namaritan’izy ireo ny toerana izay tokony hivarotana sy ny lalana ho an’ny mpandeha tongotra. Araka ny nambaran’ity tompon’andraikitra ity hatrany dia hisy ny antsoina hoe Stand métallique izay hapetraka eny amin’ity faritra ity mba ahafahan’ireo mpivarotra mivarotra ara-dalàna tsy hihoatra any ivelany. Marihana fa ireo mpivarotra 320 izay nanaiky ny fandaminana sy efa nisoratra anarana teto anivon’ny Kaominana no voakasika tamin’ny fandaminana sy nomena toerana.
Tetsy andaniny kosa dia nilaza ireo mpivarotra fa manaiky ny fandaminana izay ataon’ny Kaominina ; Toy ny zanaka sy Ray aman-dReny izahay sy ny Kaominina hoy ireo Mpivarotra ka raha misy ny fandaminana dia manaiky hatrany izy ireo.
« Nanambaran’ny Tale misahana ny Fampandrosoana ny tanan-dehibe RAZAFITSIHOARANA Edison ao amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra, fa hitantsika eto Analakely ny fandaminana .Hozaraina ny toerana andehanan’ny fiara sy ny asiana ireo mpivarotra amoron-dalana, ny olona sahirana ihany no tsijovin’ny Ben’ny Tanana Lalao RAVALOMANANA ary noheverina amin’izany ireo mpivarotra amoron-dalana.
Marihana fa ny tanin’ny Kaominina dia tsy amidy amin’ny karana na sinoa ary tsy hanao izany mihitsy ny Ben’ny Tanana.
Raha misy fanampiana ataon’ireo mpiara-belona mahalalatanana dia dia raisina antanan-dehibe.
Tonga koa ny fety ka tsy maintsy alamina ny arabe ho an’ny fiara ary asiana faritra ho an’ny mpivarotra amoron-dalana. Tsy ekena koa hoy ny Tale raha olona iray manana toerana telo ohatra.
Nanamafy koa izy fa izay tonga nivarotra androany dia tsy makany amin’ny Esplande intsony fa eo amin’ny faritra efa natokana ho asiana azy ireo.
Ankoatra izay dia raha mbola misy mpivarotra tsy manara-dalana sy tsy manaraka ny fandaminana dia ho raofin’ny CUA ny entana satria efa nomena toerana tsara sy milamina ny mpivarotra.